Dhacdo Xanuun Badan Oo Ka Dhacday Wadanka Englad. - iftineducation.com
Dhacdo Xanuun Badan Oo Ka Dhacday Wadanka Englad.
Dhacdo Xanuun Badan
Wiilka ay dhacdadaan ku dhacday ayaa qadka teleefanka inagula soo xiriiray isagoo inooga war-bixiyey sidii ay wax u dhaceyn. Hadaba lamaanahaan Somaliyadeed ayaa lagu kala magacaa Zakariya iyo Ubax, waxayna u dhacday sidatan.
Ubax xilligaas aan maqlaayey waxay joogtay magaaladda Nairobi ee dalka Kenya. Ubax inaan maqlo waxaa i suurta galiyey wiil aanu saxiib aheyn oo isna ladhihi jiray Cabaas. Maalin maal maha kamid ah ayaa waxaan soo wacay Cabaas oo joogay dalka Kenya, waxaan iska weydiiyey uun Ubax meeshii ay ku danbeysay hase ahaatee wuxu i xaqiijiyey in’ay ku sugan tahay wadanka Kenya, waxaan ka qaatay teleefankaydii. Sidaas ayuuna ku bilowday xiriirkayna.
Mudo 9 bilood kadib ayaa Ubax waxaan ka dareemay in’ay caashaq i qaaday. Waxaa ka dareemi jiray in’ay tahay qof iga xishooneysa oo aan i soo bandhigan Karin caashaqa ay i qabto. Hal sano markii ay kasoo wareegatay ayaa Ubax u soo bandhigay inaan jeclahay, halka ay iyana durbadiiba ay horey iga soo dhaweysay oo waxaaba moodaa ay in’ay ka aheyd yaa ku bilaabo uun.
Dhanka kale waxaa jiray wiil ay Ubax wada-socon jireyn inta aanu wada aqal gelin kahor, Anna waxba maanan kala soconin, in’ay hoos kala socotay. Wiilkii oo xilligaas ku sugnaa magaaladda Muqdisho ayay Ubax kasoo qaaday iyadoo keentay magaaladda Shariqah ee dalka Emirate-ka. Halkaasi ayuuna ka bilaabay waxbarasho jaamacadeed.
Mudo kadib Ubax waxay igu kicisay qeylo iyo qalalaaso joogta ah, waxayna i soo bandhigtay in’aan iska furo, halka aan aniguna uga caqli celin jiray, balse taasi maysan dhicin oo waxaan isla gaarnay ilaa aanu hor-tagno MAXKAMAD. Sidaasi ayaana ku kala tagnay.
Durbadiiba Ubax waxay bilowday shaqo xoog leh, iyo in’ay gasho Ayuuto (hagbad).
Sanad kadib waxay noqotay gabar lacag fiican heysata, waxay durbadiiba ay aaday wadanka Emirate-ka. Waxay dooneysay in’ay la-aqal gasho wiilkii ay jecleyd, halka uu isna ugu baaqay in’ay ku aqal galeyn dalka Ingiriiska, isagoo ku andacooday “Walaaley meeshan qof iima joogto, haddii aad uur qaado dhibaato fara-badan ayaa ina hor imaan karta, ee haddii aanu aqal galeyno aanu ku aqal galno London” iyadana waa ay ka aqbashay.
Ubax waxaa la-socotay gabar kale oo ay lacag siisay si’ay ugu dacwooto wiilka ay Ubax jaceshahay, halkaasi ayay uga bilowday dacwad. 8 biloow kadib wuxuu nasiib u yeeshay in uu soo caga dhigo magaaladda London. Durbadiiba waxay ku tiri wax walba aniga ayaa inoo haaya ee Macaane aanu aqal galno. 3 habeen kadib magaaladda London oo dhan ayuuba ka tagay, halka ay iyana ka bilowday Baafin iyo Raadin.
Xaalka markuu meeshaasi maraayey ayaa waxaa jirtay gabar kale oo aan daris aheyn, waxaa ina dhex maray xiriir, halkaasi ayaana ku aqal galay. Ubax waxay u tagtay wiilkii ay jecleyd Aabihii oo ku sugnaa magaaladda Liverpool, sidoo kale waxay indhaha ay soo saartay wiilkii ay jecleyd. Aabihiis ayay u sheegtay sida ay wax u dhaceyn, odaygiina wuxuu ku yiri “ haddii uu wiilka ku diiday, sheego inta lacag ah ee aad u baahan tahay aniga ayaa hada ku siinaayo, wiilkayga wuxuu lee-yahay dooq, adeer maxaan ku qaban karaa, haddii uusan ku dooneyn”
halkaasi ayay ka bilowday ooyin iyo qeylo. Waxay u imaaday Habaryartee oo joogtay London, waxayna ku tiri “ Habaryar Nafsigii aan ka galay Zakariya ayaa iga soo baxay, ee habaryarey Zakariya ha’iskakey cafiyo, nin iga wanaagsan-na majiro, waxaana u baahanahay in uu igu soo noqdo” Habaryartee oo aad u careysan ayaa caro kala dul dhacday Ubax, waxayna u sheegtay in’aan hadda aqal galay, welibana ay xaaskayga ay i leedahay UUR.
Hadaba waxaan ugu baaqayaa dhalinta Somaliyadeed in’ay ka waan-toobaan dhacdadaan oo kale, waxaan kaloo idin lee-yahay qofkii nafsi galaa, maalinta ay doonto hana-qoto’e
Dhacdo Layaab Leh Oo Kadhacday Dalka Mareykanka Kadib Markii
Heeska Macaan ee Kampala Adaa Ibaday Yaa Iska Leh (Daawo Muuqaalka Heesta Macaan ee Kambaala Adaa i baday)